Mon, Aug 20, 2018 | 14:19:04 NST
13:22 PM (4years ago )
Total Views: 25.8 K
संविधानका मुख्य विवादित विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका मुद्दामा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । जसका कारण संविधान बनाउने काम अलमलमा परेको छ ।
विवादित विषयमा सहमति खोज्न बनेको संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद फेरि सात दिन थपिएको छ । यसबीचमा पनि सहमति हुन सक्ने भरपर्दो आधार केही देखिंदैन । यहीबेला उच्चस्तरीय समिति पनि गठन भएको छ ।
मुख्य तीन दलले आफूखुशी काम गरेको भन्दै अरु दलहरु रुष्ट समेत भैरहेका छन् । यस्तो बेला संविधान निर्माणको काम कसरी अघि बढ्ला ? सहमतिको लागि साना दलहरुको एजेण्डा र भूमिका के ? यसै सन्दर्भमा साथी मिलन तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरेको कुराकानी :
केसीज्यू, माघ ८ मा संविधान बन्छ ?
कठिन छ । संघीयताकै कारण संविधान नबन्ने भयो । संघीयताले नै संविधान बनाउन दिएन । खास गरेर जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने एकीकृत माओवादी, जातीवादी र पृथकतावादीहरुको जिद्धिले संविधान बन्दैन । संघीयता मान्नेहरुको बीचकै कारणले सहमति नभएर संविधान आउन सक्ने अवस्था कठिन देखिन्छ ।
संघीयता नमान्नेहरुको कारणले पनि त सहमित जुट्न सकिरहेको छैन नि ?
त्यसो होइन, संघीयता मान्नेहरु बीचकै लफडाले हो । हामीले त संघीयता ल्याएर देखाइदिनुहोस् भनेका छौं । संघीयता हुँदैन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण गरौं भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । नारायणहिटीको अधिकार सिंहदरबारमा ल्याएर अहिले पनि एकात्मक भ्रष्ट शासन चलाइरहेका छन् ।
मुख्य दलहरुबीच कुरा मिलेर संघीयता सहितको संविधान बन्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
संविधान बनाउने काममा अवरोध गर्दैनौं । संघीयता सहितको संविधान आउँछ भने पनि संविधान आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संघीयताको मात्र बिरोध गर्छौं । हामीले जनताको बीचमा अहिले पनि संघीयताको बीचमा हाम्रो विमती छ भनिरहेका छौं । हामीले बिरोध गरेको कारणले भन्दा पनि स्वयं नेपालको परिस्थितिले यहाँ संघीयता टिक्दै टिक्दैन । प्रणालीको बिरोध होइन । सुगर भएको मान्छेले चिनी खाँदैन, चिनी खान हुँदैन । भनेको उ चिनी बिरोधी त हुँदैन नि ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली हुन सक्दैन र हुँदैन भन्ने कुरा त व्यवहारले देखाइसकेको छ । आर्थिक रुपमा एउटा संसद चलाउन नसेकाले, मुलुकमा एउटा पेट्रोलियम पदार्थको खर्च टार्न नसक्नेले १२/१४ वटा नेपाल धान्न सक्छ ?
यही नारा लिएर चुनावमा जाँदा खै त जनताले तपाईंलाई पत्याएर भोट दिएको ?
मेरो पक्षमा मत आएन त्यही कारणले एकात्मक प्रणाली बेठिक हो भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले पहिले पञ्चायती व्यवस्थाको बिरोधमा आन्दोलन गथ्र्यौं । घरैका जहान परिवार हाम्रो विपक्षमा थिए । बा, आमा, मावली, ससुरालीले भन्थे यो पञ्चायती व्यवस्था राजाले ल्याएको हो, पहरालाई कुहिनाले हानेर हुँदैन । बिरोध गर्न हुन्दैन भन्थे । तर इतिहासले त प्रमाणित गरिदियो नि । त्यस्तै हो, जनताले मत नदिएपनि संघीयताले देशलाई राम्रो गर्दैन भन्ने त समयले प्रमाणित गर्नेछ ।
अहिले सहमतिको लागि फेरि संवाद समितिको म्याद थपिएको छ । यसबीचमा विवादित विषयमा सहमति जुट्ला जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?
पहिले पनि हामीले म्याद थप्नु निरर्थक छ भनेका थियौं । ६, ६ वर्ष, ५, ५ वर्ष सहमति हुन नसक्ने । यो चाहिँ नेपाली जनतालाई किन उल्लू बनाइरहने ? अहिले थप्नुको कुनै औचित्य छैन ।
त्यसो भए सहमति हुँदैन ?
कहाँ हुन्छ त । कांग्रेस र एमालेले एकल जातीय राज्य मान्ने हो भने हुन्छ । तर अहिले संघीयता सहितको संविधान बनाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले ठीक ठाउँमा छन् । प्रदेश कम बनाउनुपर्छ, जातीय प्रदेश बनाउन हुँदैन भनेर उनीहरुले भनिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेसँग मेरो कतिपय कुरामा मतभेद छ । संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुरामै मतभेद छ । तर एकीकृत माओवादी र पृथकतावादीहरुको तुलनामा कांग्रेस र एमाले संविधानका अहिलेका अन्तर्वस्तुमा मूलतः ठीक ठाउँमा छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पनि गठन भएको छ, यसले संविधान निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्ला ?
यसअघि पनि थियो नि यस्तो सहमति । संविधानसभा र संसदभन्दा बाहिर जसरी समिति बनेको छ, यो असंवैधानिक छ । गलत छ । प्रचण्डको चाहना कांग्रेस र एमालेलाई लतार्न हो । ४० दिनसम्म संसद अवरोध गरे । त्यसकारण कांग्रेस र एमालेलाई नाकमा सुथरी लाएर लतार्ने र यही संयन्त्रबाट लतारेर आफ्नो दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्न बनाएको संयन्त्र हो । प्रचण्डको मात्र होइन, यसमा अरुको पनि खेल हुन सक्छ । यसमा कांग्रेस र एमालेले घुँडा टेके । कांग्रेस र एमालेलाई नाकमा सुथरी लाएर लतार्न बनाएको संयन्त्र हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
४० दिनसम्म त कांग्रेस र एमाले अडिए । तर सकेनन् । उनीहरु पनि फेरि कागज गर्ने र सम्झौता गर्नेबेला सजिलैसँग गरिदिन्छन् । त्यसको परिणामसँग उनीहरु पनि गम्भीर छैनन् । त्यसैले कांग्रेस र एमालेसँग पनि मलाई डर लागिरहन्छ ।